ट्विटर कसरी प्रयोग गर्ने?
सामाजिक सञ्जाल आज रोल को लोकप्रियता। तिनीहरूले आफ्नो स्वतन्त्र समय खर्च तपाईंको व्यापार विज्ञापन, फेला पुरानो मित्र। यी साइटहरूमा बीचमा यो ट्विटर (twitter.com) जस्तै एक सेवाको खडा। यो सामाजिक सञ्जाल कसरी प्रयोग गर्ने र लाभ के हुन्?
सन्देशहरू दर्ता र पठाएर
पहिलो चरण भनेर ट्विटर कसरी प्रयोग गर्ने थाहा सुनिश्चित छ - यो दर्ता हो। यहाँ, सबै कुरा कुनै पनि साइट मा छ: इमेल ठेगाना, आफ्नो नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्, र "दर्ता" बटन वा «साइन अप» (मूल इन्टरफेस अंग्रेजी छ भने) मा क्लिक गर्नुहोस्। "सेटिङ" अन्तर्गत आउट गर्न चाहनुहुन्छ कि आफैलाई बारेमा जानकारी सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ, आवश्यक भएमा, तपाईं आफ्नो वेबसाइट वा ब्लग को ठेगाना थप्न सक्नुहुन्छ।
अब हामी यो नेटवर्क को दिल मा के गर्न अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईंको सन्देश पठाउन र पढ्न अरूलाई - कि, वास्तवमा, सबै तपाईं सेवा ट्विटर को मद्दतले गर्न सक्ने। यो मौका कसरी प्रयोग गर्ने? धेरै सरल। बायाँ तल कुनामा दर्ता गरेपछि के तपाईं सदस्यता कि सक्नुहुन्छ (वा, सामान्यतया व्यक्त गरिएको छ रूपमा, पालना गर्न) सन्देश मा मानिसहरूको सूची देखाइएको छ। एक चयन गर्न, तपाईंले रुचि भएको व्यक्ति अगाडि "पढ्नुहोस्" क्लिक गर्नुहोस्। सही पक्षमा सन्देशहरू आफूलाई देखाउनेछ। संगीत, राजनीति, हास्य, आदि: अर्को तपाईं रुचि हो कि एक विषय छनौट गर्न आग्रह गरिने यी विषयहरू प्रत्येक मा, तपाईं जसको पोष्ट तपाईंले पढ्न रुचि हुन सक्छ एक व्यक्ति वा संस्थाको चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
आफ्नै सन्देश पठाउन ट्विटर कसरी प्रयोग गर्ने? तपाईं आफ्नो सन्देश अन्य प्रयोगकर्ता द्वारा पढ्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि बस पाठ लाइन, तपाईंको खाता माथिल्लो बायाँ कुनामा स्थित छ जो टाइप गर्नुहोस्। सन्देश आकार 140 वर्ण भन्दा बढी हुँदैन। पाठ टाइप, बटन थिच्न "ट्वीट।" सन्देश विशिष्ट व्यक्ति हो भने, आफ्नो उपनाम (@MyFriend ढाँचामा) को सुरुमा प्रविष्ट गर्नुहोस्।
पहिलो नजर मा, प्रतिबन्ध मात्रा मा वर्ण लजालु जस्तो देखिन्छ। तर तिनीहरूले पनि आफ्नो फाइदा छ। पहिले, तपाईंले कसरी आफ्नो विचार छोटकरीमा व्यक्त गर्न सिक्न हुनेछ। दोश्रो, यस्तो सेवा साइटहरू वा ब्लग प्रयोगकर्ता लेख आधा पृष्ठ भन्दा छोटो पाठ पढ्न धेरै सजिलो हुनेछ को पदोन्नति को लागि उपयोगी छ। मुख्य कुरा हो - कसरी प्रयोग गर्ने बुझ्न। Twitter तपाईं सधैं आफ्नो कम्प्युटरको आउन मौका छैन भने धेरै सुविधाजनक छ जो मोबाइल, सन्देशहरू पठाउनका लागि कन्फिगर गर्न सकिँदैन। यो गर्न, ठेगाना m.twitter.com प्रयोग वा विशेष सफ्टवेयर twitter.com/downloads मा ट्विटर प्रदान गर्दछ डाउनलोड गर्नुहोस्।
मित्र फेला पार्न ट्विटर कसरी प्रयोग गर्ने? यो धेरै सरल छ। ट्याब "मित्र फेला" मा त्यसपछि पृष्ठ को शीर्ष मा ट्याब "वर्तमान" मा क्लिक गर्नुहोस्। जहाँ तपाईं धेरै विकल्प छनौट गर्न आग्रह गरिने छ। तपाईं यदि तपाईं एक उपयोग गर्दै छन्, इमेल ठेगाना खोज बक्स मा नाम र प्रत्येक अन्य को थर प्रविष्ट गर्नुहोस् वा पाउन सक्नुहुन्छ इमेल सेवा ट्विटर मा पहुँच गर्न सकिन्छ। तपाईं "खोज ठेगाना पुस्तक" मा क्लिक गर्नुहोस् पर्छ यो गर्न र यसरी आफ्नो मेलबक्स सेवा प्रदान गर्दछ। के तपाईं सही व्यक्ति पत्ता लगाउन एक पटक, तपाईं "पढ्नुहोस्" मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, र अब त्यो तिनीहरूले zafolovlennyh, ट्विटर मा भन्न रूपमा "पढ्न" वा, बीचमा हुनेछ। कसैले तपाईं र थप पाता भने, यो पाठकहरु वा अनुयायीहरूको संख्या तपाईंको पृष्ठमा प्रदर्शन गरिनेछ। बटन "रद्द गर्नुहोस्" क्लिक गरेर सन्देश सदस्यता हटाउन।
यी सुविधाहरूमा साथै, ट्विटर सन्देशहरू आफ्नो प्रोफाइल फोटो र संलग्नहरू थप्न मौका प्रदान गर्दछ। तपाईं आफ्नो लिङ्कमा पृष्ठ बनाउन सक्छ सेटिङ आफ्नो रुचि शैली चयन गर्नुहोस्।
यहाँ, शायद, र सबै कस्तो ट्विटर प्रयोग गर्न। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो सेवा एकदम प्रयोग गर्न सजिलो छ। तर, एकै समयमा, यो एक महान विज्ञापन मंच र समाचार साइट हो।
खोज इन्जिन अनुकूलन, आन्तरिक लिङ्किङ साइट, एसईओ को बोल
कसरी रूस प्रतीक चरणमा पेन्सिल आकर्षित गर्न? व्यावहारिक सुझाव, सल्लाह
दिमित्री Ulyanov: चलचित्र, जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
आधुनिक माछा खेलौना रोबोट - बच्चाहरु को मनपर्ने
सूची र विवरण: आफ्नै अंग्रेजी सिक्न सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू
Geely GC6: समीक्षा र कार समीक्षा
Uterine fibroids। उपचार
"Glycine" बेबी: समीक्षा, आवेदन, औषधिको खुराक र प्रभावकारिता को सुविधाहरू
किन नवजात ग्याँसहरु